Qabsoo Bilisummaa Oromoo Keessatti Shanee Jechuun Maal Jechuudha? – Oromedia
Home » Siyaasaa » Qabsoo Bilisummaa Oromoo Keessatti Shanee Jechuun Maal Jechuudha?
Qabsoo Bilisummaa Oromoo Keessatti Shanee Jechuun Maal Jechuudha? Shaneen
Kabajaa Ture, Har’a Maaliif Arrabsoo Fakkaate? Eenyutu Eenyuun Shanee Jedhe?
Kan barreesse Moonenus Hundarraa ti.
1. Shanee bara Caccabuu ABO: Shaneen kun namootaa fi hooggantoota Qabsoo Bilisummaa Oromoof amanamanii shira fedha murna tokkoo didan yeroo sanaati. Isaan ABO jedhamu malee Shanee hin jedhaman. Kan Shanee jedhee moggaase warra ABO keessaa fedha dhuunfaaf ykn fedha murnaaf foxxoqanii ba’anidha.
2. Shanee Wayyaaneen dhalfattedha. Shaneen kun biyya keessatti bifa gandummaadhaan kan gurmaa’anii fi Hayyu Duree ABO wajjin hidhata addaa qabu jedhamanii socho’anidha. Ani isa kana yeroon AAU turen bare. Namoonni Hayyu Dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa naaf bilbilan; qarshiin ergame; meeshaan ergame jedhanii dhaloota qaroo ta’an of jalatti ijaaruudhaan mootummaa kanaaf gumaata galchanidha. As keessatti humni tikaa fi qaruxummaa Wayyaanee/OPDO hooggansa kallattii kennaa ture. Dhimmi Girmaa Xurunaa as keessa jira.
Previous: Seemaa: Falaasama seera uumaa fi uumama Oromoo
Next: Seenaa Gaazexaa Bariisaa